U-Mohamed Dia wethula i-Diacash Mastercard yakhe ekhokhelwa ngaphambili - i-Afrikhepri Fondation
U-Mohamed Dia uqala ikhadi lakhe lokukhokhelwa i-Diacash Mastercard
Lumsunguli wezingubo zokugqoka zakwaM.Dia ngu " buyela ebhizinisini Ngomqondo omusha wonke. Iphayona langempela lezimpahla zomgwaqo U-Mohamed Dia, wayengomunye wezigidigidi zokuqala. Uma ezinkulu fashion house noma ezinye abaklami ehlonishwayo lanamuhla ezidayiswa ukudidiyela ngokugcwele streetwear kule ndawo, uMohamed Dia has a lot. Ngempela nge angamagagu ephawula, ku 90 ngasekupheleni ebona ukuqhuma rap ku iheksagoni nensimbi nemikhonto nabangane bakhe ngalokho ayekuhlosile ebuntwaneni kusukela Sarcelles (Paris nedlelo): Doc Enema Stomy Bugsy noma Ärsenik. Wanquma ukunikeza isitayela ingubo ezokwenza agqoke ahambe futhi zifanekisela yokuchuma rap French nge uphawu lwakhe Mnu Dia. I-Baggy Jeans, i-T shirt, i-Hoodies noma i-basketball imishini. Kuzophumelela ukuvakasha kwamandla ukuze enze uphawu lwegciwane lesikhathi ngesikhathi noma i-Facebook, ne-Twitter abengekho ngisho nasesiteji se-embryonic. Ukubambisana ne-American Basketball Federation (NBA) kanye ne-parade eLouvre carousel kamuva, uDia uzama i-American adventure.
Uma iqembu DIA usakhula kwezilwandle emikhakheni eyehlukene, kuba Mogul yasebhange itholé ukuguqulwa yimpumelelo. Ngempela, kuba 2016 wanquma ukwenza asebuya ngezinkani ne kwethulwa ikhadi layo esikhokhelwa DiaCash MasterCard (R), ngokubambisana ne CreaCard SA. Lena ukusakaza okusheshayo kwe-MasterCard. Ikhadi okwamanje itholakala ukudayiswa okungaphezu kokuphonswe 5.000 tobacconists yonkana IDF futhi luzoqaliswa 10.000 Izitolo esengeziwe ekupheleni ngekota 2016 kuqala. Ikhadi DiaCash inqe e tobacconists libuyisele oqondile ukheshe noma ivawusha ashona ngo inani EUR 20, 50 100 euro noma euro. Amakhasimende afisa ukuthenga ikhadi akudingeki ukuthi ahlinzeke ifomu elithile noma isheke lesikweletu. Abakwazi nje ukuthenga ikhadi esitolo noma kuwebhusayithi www.dia-cash.fr, kusebenze ikhadi yabo futhi bathola PIN yawo usebenzisa ukusebenza elula SMS, ashona futhi usebenzise khona manjalo abathengisi, kuyi-Internet noma ATM (Automated Teller Machines). Isici SMS ikuvumela abanikazi bamakhadi ukuze ulayishe ikhadi yabo ngezimali, ukwabelana imali kanye nomndeni kanye nabangane abanamakhamera amakhadi, khiya uphinde uvule ikhadi yabo ngesikhathi sangempela futhi kweso uthole ibhalansi ikhadi yabo. Lezi zici zokufinyelela ezivulekile ziyatholakala noma kunini, noma kuphi, noma kuphi emhlabeni.
U-Mohamed Dia, uMsunguli wohlobo lwe-DIA, uyachaza: “Ungathola kunoma yisiphi isitolo sikagwayi noma ucindezele, ubukeka njengamaconsi amabili amanzi eVisa noma i-MasterCard yendabuko. Umehluko omkhulu ukuthi igama lomnikazi walo alibhalwe kulo ngezinhlamvu zegolide: njengoba zingaxhunyiwe kunoma iyiphi i-akhawunti yasebhange, empeleni zingahlala zingaziwa ngokuphelele.
Ukuze ashona, umane kabanikezi ukheshe labo okulindeleke ukuba tobacconist, ukuthola esenana ithikithi ngenani elithandekayo, bese ukudlulisa inombolo nge-SMS noma i-Internet ukuze iseva ikhompyutha, okuzokwenza ukulayisha ngokuzenzakalelayo. Ngakho-ke, ingasetshenziswa njenganoma iyiphi ikhadi lesikweletu yezitolo izitolo noma ukuhoxisa ukheshi ku ATM, ukuthola iholo lakhe nge-akhawunti yasebhange, uthumele imali isihlobo kusukela uhlelo lokusebenza lweselula (olutholakala ku-Apple esitolo ne-Android) »
Kulindeleke kusengaphambili ukuthi le nsizakalo engabonakali kalula umsebenzi webhange uyinkqubo yokuxubha, ukuguqula imikhuba kanye nokusetshenziswa kwamaphethini aseFrance.